Serif, mpamorona Affinity, te-hividy ny asanao | Famoronana an-tserasera
Roa herinandro lasa izay dia efa nanambara izahay fa Serif dia nametraka ny fandaharana rehetra maimaimpoana nandritra ny 90 andro. Miresaka momba ny programa Affinity izahay. Izao dia manana ianao nanambara fa te hividy ny asa famoronana nataonao ianao ary amin'ny lafiny sasany dia tsy nampiasaina ho an'ny tetikasa na asa aseho.
Efa nilaza izany tamin'io andro io ihany isika. Serif dia hampiasa ampahany amin'ny teti-bolany isan-taona hanampiana ireo mpamorona ary ny fomba hanaovany izany dia amin'ny alàlan'ny fividianana ny sanganasan'izy ireo. Izany hoe ilay mitovy amin'ny azonao atao te-hovidin'ny mpamorona ny Affinity Photo, Designer and Publisher.
Hotontosaina ny 100 Andro ny vaomiera mandritra ny 3 volana ary mangataka i Serif ho an'ny mpamorona, ny mpaka sary ary ny tonian-dahatsoratra handefa ny sangan'asany ho fiheverana na fandinihana azy ireo. Ny zavatra manokana momba an'ity fampiharana ity dia ny tsy fangatahan'izy ireo asa manokana na lohahevitra manokana.
Mazava ho azy fa misy fepetra takiana. Inona ny asa dia vita tamin'ny fampiharana Affinity, na Photo, Publisher na Designer. Koa mamporisika anao izy handany ny fotoananao ary hanomboka hamorona asa azon'izy ireo tsara fa marina.
Ny teboka dia izany koa azonao atao ny mampiseho izany asa vita amin'ny fampiharana izany ary izany na inona na inona antony dia nofoanana na tsy nosafidian'ny orinasa na mpanjifa farany. Raha atao teny hafa, ireo asa mety anananao ao anaty fampirimana Windows dia azo aseho ho an'ny Serif.
Ny tiana holazaina dia hoe tsy mila izany isika mamorona asa vaovao (na dia azo atao aza izany) ary ireo izay nofoanana dia azon'ny Serif alalana. Ireo no karazana asa tadiavin'izy ireo:
antontan-taratasy hanonta ny zava-misy ao amin'ny Affinity Publisher.
Sary, sary sy singa mpiorina vita amin'ny Designer, ao anatin'izany ny kisary, layout, logo ... ho an'ny tranonkala.
Tetikasa noforonina tao amin'ny Affinity Photo toy ny retouching sary, kompositions, panorama, HDR ary maro hafa.
Azonao atao ihany koa alefaso ny portfolio-nao na hevitra iray aza. Manana hatramin'ny 20 aprily ianao handraisana anjara ary handresy $ 1.500 ho an'ny asa. Ao amin'ny tranonkalanao no mila anaovanao azy tsara avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Serif, mpamorona ny Affinity, dia te-hividy ny sanganasa noforoninao